सुरु बच्चा र बच्चा सुरक्षा बच्चा निगरानी
1 बेबीफोन - पाडलमा थप सुरक्षाको लागि
1.1 बेबीफोन - यसको के मतलब छ?
1.2 यो आधुनिक बेबीफोन कसरी काम गर्दछ
1.3 बच्चा खरिद गर्दा के छलफल गर्नुपर्छ?
1.3.1 सजिलो कमीशन
1.3.2 दायरा, ब्याट्रि जीवन र जडान
1.3.3 विशेष सुविधाहरू र सामानहरू
1.4 कसरी एक बेबीफोन स्थापना र प्रयोग गरिन्छ?
1.5 क्यामेराको साथ क्यामेरा - यो अधिग्रहण सार्थक हो?
1.6 बेबीफोनसँग गति डिटेक्टर - यो अधिग्रहण सार्थक हो?
1.7 बेबीफोन संग अन्तर्क्रिया प्रणाली - के यो यसको लायक छ?
1.8 मोबाइलफोनको माध्यमबाट बेबीफोन
1.9 बेबीफोनको फाइदाहरू के हुन्?
1.10 के राम्रो बेबीफोन बनाउँछ?
1.11 बेबीफोनको नयाँ सुविधाहरू के हो?
1.12 बेबीफोन अनुप्रयोगहरू - सबैभन्दा आधुनिक विकल्प?
बेबीफोन - पाडलमा थप सुरक्षाको लागि
शायद आमाले डराउनु हुँदैन कि केहि समयको पर्यवेक्षण छैन भने बच्चालाई नर्सरीमा केहि हुन सक्छ। विशेष अचानक बच्चाको मृत्यु एक "दुश्मन छवि" हो, जो आमाहरु बच्चाको पूर्ण निगरानी संग भेट्न चाहन्छन्। तथापि, आमाहरूको हेरचाह गर्दा थप आमाको लागि यो गाह्रो हुनेछ। एक बच्चा निगरानी आमाले बच्चाको मनिटरमा अधिक स्वतन्त्रता दिन्छ र आमाबाबुको सुरक्षा आवश्यकतालाई सेवा गर्दछ।
बेबीफोन - यसको के मतलब छ?
एक बेबीफोन सधैं दुई घटक हुन्छन् - एक रिसीभर र ट्रांसमीटर। कोठामा जहाँ बच्चा बसिरहेको छ, ट्रांसमीटर सेट अप गरिएको छ र रेडियो टेलिभिजनले रिसीभरमा सबै आवाजहरू प्रसारण गर्दछ। आमाबाबु, जो अर्को कोठामा छन्, बच्चाहरु को कोठा मा के हुन्छ भनेर सुन्न सक्छ।
यो आधुनिक बेबीफोन कसरी काम गर्दछ
एनालॉग र डिजिटल यन्त्रहरू बीच एक भेद बनाइयो। एनालॉग बेबीफोनहरू प्राय: सरल, लागत-प्रभावी प्रणालीको कारण प्रस्तावित गरिन्छ। यन्त्रहरूमा सामान्यतया 8 च्यानलहरू छन्। ट्रांसमीटर र रिसीभर शोर प्रसारण गर्नको लागि एकै च्यानलमा सेट गर्नु पर्छ। किनकि यी यन्त्रहरू वास्तवमा ठीकसँग काम गर्दैनन्, तथापि, धेरै उपभोक्ताहरूले अब बेबीफोनको डिजिटल संस्करणहरू मन पराउँछन्, जुन हस्तक्षेप-मुक्त र टास-प्रोको रूपमा मानिन्छ। डिजिटल बेबीफोनहरू DECT टेक्नोलोजी र एक समान राम्रो आवाज गुणको माध्यमबाट ताररहित फोनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको अतिरिक्त, बेबीफोनले धेरै उपयोगी सुविधाहरू जस्तै एलईडीहरू छन्, जसलाई आवाजमा नेत्रहीन रूपले देखाउँछ।
बच्चा खरिद गर्दा के छलफल गर्नुपर्छ?
आमाबाबु जो बच्चाहरूको कोठाको लागि निगरानी समाधान छनौट गर्न चाहनुहुन्छ केही मापदण्डहरू विचार गर्नुपर्छ। अन्तमा, गुणस्तर र मूल्यमा फरक फरक फरक यन्त्रहरू फरक फरक हुन्छन्। निम्न बिन्दुहरू खरिद निर्णयमा समावेश गर्नुपर्छ:
चयन गरिएको बेबीफोनले टेक्नोलिक रूपमा नचाहिएका प्रयोगकर्ताहरूको लागि कमीशनको बेला कुनै पनि प्रश्नलाई रोक्न सक्दैन। प्रयोगकर्ता-अनुकूल अपरेशन सधैं आवश्यक छ।
दायरा, ब्याट्रि जीवन र जडान
निर्माताहरूले सान्दर्भिक जानकारी प्रदान गर्नेछन्। यो जानकारी निश्चित सूचक मानहरूको साथमा हुनुपर्छ। यो सब भन्दा महत्त्वपूर्ण छ, सबै भन्दा माथि, कि पुन: चार्जेबल ब्याट्रीको लागि आवश्यक समयको लागि यन्त्रलाई पुन: प्रयोगको लागि पुरा तरिकाले तयार बनाउनुपर्दछ। अर्को महत्त्वपूर्ण मापदण्ड दायरा हो। अन्ततः, बच्चाको कोठाबाट शोर न केवल अर्को कोठामा, तर तहखाने वा बगैंचामा मात्र सुन्न सकिन्छ। यसको अतिरिक्त, शोर प्रसारणको गुणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, त्यसैले सबै परिस्थितिहरू सही मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।
विशेष सुविधाहरू र सामानहरू
धेरै उच्च मूल्य वाले बेबीफोनहरू अतिरिक्त वा कम उपयोगी छन् एक्स्ट्रास्टहरूको साथमा। यसरी, केही उपकरणहरू रातो प्रकाशको साथ सुसज्जित छन्, अन्यहरूले सुत्न खेलिरहेका छन् र अरूलाई ताररहित टेलिफोनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सम्भावनाहरू गुणात्मक छन्।
कसरी एक बेबीफोन स्थापना र प्रयोग गरिन्छ?
बेबीफोन पूर्वनिर्धारितको रूपमा पूर्व-सेट हो। तथापि, निर्माताको आधारमा कमीशन गर्न र मोडेल कार्यका लागि आवश्यक चरण फरक फरक छ। यसैले प्रत्येक यन्त्र एक प्रयोगकर्ता सँग अध्ययन गर्नु पर्छ कि एक विस्तृत गाइड संग। सामान्य अवस्थामा, बेबीफोनमा खोल्न र च्यानल चयनको माध्यमबाट दुई यन्त्र घटकसँग मेल खाने पर्याप्त छ। एक घुमाउने केटी वा एक घुम्न रेडियो च्यानल परिवर्तन गर्न सामान्यतया जिम्मेवार छन्। सेटिङ पछि, सबै परीक्षण सही छ भनेर सुनिश्चित गर्न एक परीक्षण गर्नुपर्छ। बच्चाहरु को कोठा मा ट्रांसमीटर को रूप मा, बच्चा को बिस्तर देखि दूरी मा राख्नु पर्छ। यद्यपि सबै भन्दा राम्रो बेबीफोन पिटरमा छ भने, आमाबाबुले पनि नियमित रूपमा आफूलाई आफ्नै आँखाको साथ मान्नुपर्छ, कि बच्चाको कोठामा सबै सही छ।
क्यामेराको साथ क्यामेरा - यो अधिग्रहण सार्थक हो?
क्यामेराले यसको साथ केही फाइदाहरू ल्याउँछ। विशेष गरी कहिलेकाहीं विशेष हेरविचार आवश्यक छ, क्यामेराको साथ एक बेबीफोन सहयोगी हुन सक्छ। बीउ बच्चाहरु अन्ततः अधिक शोर बनाउँछ, जुन प्रायः असुविधाजनक छैन। आमाबाबुले क्यामेरा मार्फत राम्रो परिस्थितिको वास्तविक गम्भीरता कायम गर्न सक्छन् र हरेक शोरको साथ तुरुन्तै सुरू गर्नु हुँदैन।
बेबीफोनसँग गति डिटेक्टर - यो अधिग्रहण सार्थक हो?
गति डिटेक्टरको साथ एक बेबीफोन एक विशेष उपकरण हो। ट्रांसमीटर यहाँ मात्र सामान्य ध्वनि ट्रांसमीटरको रूपमा काम गर्दैन, तर एक चटाईसँग जोडिएको छ जसमा गद्दा बच्चासँग अवस्थित छ। चटाई हरेक आन्दोलनको रेकर्ड गर्दछ। यो उपकरण पनि बच्चाको सास फेर्ने निगरानी गर्न सकिन्छ। यी धेरै यन्त्रहरू केवल निश्चित अवधिको लागि गतिहीनता स्वीकार गर्छन्। यदि बच्चा विस्तारित अवधिको लागि बिस्तारमा झरेको छ भने, अलार्म ध्वनि हुनेछ। यी यन्त्रहरूले अनियमितताहरूको प्रारम्भिक पत्ता लगाउँछन् र अचानक बच्चाको मृत्युको चाँडो पहिचान प्रदान गर्दछ।
बेबीफोन संग अन्तर्क्रिया प्रणाली - के यो यसको लायक छ?
काउन्टर-फैलिङ प्रणालीको प्रकार्यले बच्चालाई केही सुख्खा शब्दहरू वा नींद सदस्यलाई दूरीमा सम्भव पार्न सक्छ। यी उपकरणहरूको साथ, ट्रांसमीटर रिसीभरमा स्विच गर्न सकिन्छ र यसको विपरीत। यो प्रकार्य अब लामो दूरीको लागि उपयोगी छ, किनभने बच्चा यति उत्साहित छैन जब आमामा राख्नु पहिले आमा वा बुबाको आवाज सुनेको छ।
मोबाइलफोनको माध्यमबाट बेबीफोन
एक मोबाइल फोन पनि बच्चा फोन मा परिवर्तित गर्न सकिन्छ। यस अवस्थामा, स्वचालित कल प्रकार्य, जुन स्वचालित रूपमा कलको समयमा बन्द हुन्छ, फोनको मामलाको रूपमा शोर प्रसारण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तथापि, त्यहाँ बाह्य यन्त्रहरू छन्, जुन मोबाइल फोनसँग जोड्न सकिन्छ र त्यसपछि सामान्य बच्चा फोन जस्तै प्रकार्य हुन सक्छ। दुवै प्रणालीहरू निर्दोष रूपमा र सुदृढ रूपमा काम गर्छन्।
बेबीफोनको फाइदाहरू के हुन्?
रोजगारीको जीवनमा एक बच्चाले अभिभावकको अधिक स्वतन्त्रतालाई आमाबाबुलाई सहायता गर्दछ। यसरी आमाहरूले घरको कामकालमा सुत्ने छोराछोरीलाई निरीक्षण गरेका छन्। जबसम्म सन्तानहरू उठ्छन् र खुसीसाथ खुसी हुन्छन्, आमा यसको बारेमा जान्दछन् र तुरुन्तै बाटोमा जान सक्छ। जब आमाबाबुको कोठामा बच्चाको कोठाबाट अलि बढी छ, आमाबाबुले रातको बच्चाको भलाईमा पूर्ण नियन्त्रण पाउँछन्। पहिलो चीतामा, आमाबाबुले आफ्नो बाटोमा पाउन सक्दछन्। विशेष गरी, यदि बच्चा बिरामी हुन्छ भने, बच्चाले आमाबाबुलाई आवश्यक सुरक्षा दिन्छ। / P]
के राम्रो बेबीफोन बनाउँछ?
राम्रो बच्चाको निगरानीले केहि मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण मापदण्ड निम्न हुन्:
बच्चाको उच्च गुणस्तरको लागि सामग्रीको छनौट बोल्छ। विशेष गरी, किनकि बच्चाहरु र बच्चाहरु लाई मुखले सबै कुराको जाँच गर्दछन् भने, सामग्री पूर्ण विषाक्त-रहित र समान रुपमा बलियो हुनुपर्छ।
एक बच्चा फोनले सामान्य उचाईको क्षतिलाई बिना क्षतिको सामना गर्न सक्षम हुनु पर्छ। नर्सरीमा स्पिकर एक वास्तविक खतरा हुनेछ, किनभने यो बच्चाहरु द्वारा निगल हुन सक्छ। त्यहि साना साना भागहरूमा पनि लागू हुन्छ जुन बच्चाको साथ केहि गर्न सक्दैन। जब खरिद गर्दा, इकाईलाई अधिकतम दुई घटकबाट बनाइएको निश्चित गर्नुहोस्।
बेबीफोनको नयाँ सुविधाहरू के हो?
यन्त्रहरू साना र सानो गर्दै छन्, ब्याट्रि जीवन लामो हुदैछ र सुविधाहरू अधिक र अधिक व्यापक हुँदैछ। प्रत्येक निर्माताले बजारमा कहिल्यै नयाँ कार्यहरू समेट्न चाहन्छ। गति डिटेक्टरहरूको अलावा, भिडीयो टेलिभिजन र कुनै अन्य प्रकारको निगरानी अब बच्चा फोनको साथ सम्भव छ। विश्वास गर्न गाह्रो छ कि कति प्रविधिहरू यी सानो यन्त्रहरूमा प्याक गर्न सकिन्छ।
बेबीफोन अनुप्रयोगहरू - सबैभन्दा आधुनिक विकल्प?
सबै सम्भावना उद्देश्यका लागि, अब एक एप हो, यसैले बेबीफोनको प्रकार्यको लागि पनि। यस सफ्टवेयर स्थापना गरेर, स्मार्टफोन, आईप्याड वा ट्याबलेट एक बच्चा फोनमा परिणत हुनेछ। पहिले नै हार्डवेयरमा पहिले नै हार्डवेयरको रूपमा उपलब्ध छ किनकि, एप एक अति लागत-प्रभावकारी विकल्प हो। तथापि आमाबाबुले एप्सका सेवाहरू वास्तवमा विश्वस्त हुन सक्दछन्, तथापि, उत्तरदायी छ।
अघिल्लो लेखबच्चाहरु डेस्क कुर्सी